Akhriso 13 Qodob Oo Ka Turjumayo Furayaasha Horumarka “Horumari Naftaada”.. | Hooyga Barbaarinta Qoyska & Wanaaga Bulshada Hooyga Barbaarinta Qoyska Iyo Wanaaga Bulshada - Www.Kobciye.Com
Akhriso 13 Qodob Oo Ka Turjumayo Furayaasha Horumarka “Horumari Naftaada”..
Published: March 14, 2014, 11:20 am
Qof walibaa oo dunidan ku nool waxa uu jecel yahay in uu gaaro guul ama hadafkiisa uu ka dhiidhiyo balse si aan hadafkeena u hiiksano waxa ay inooga baahan tahay in aan la imaano wadadii aan u mari laheyn ka dhabeynta himiladaa
Hadaba waxa jira dhow arimood oo an kasoo qaadanay 13kan qodob ee hoos ku xusan oo ah furaha horumarka sida in aad noqoto taajir. Arimahan ayaa lagu soo bandhigay daraasad ay samaysay aqoonyahanad u dhalatay wadanka Sweden oo soo saartay buug ay ugu magac dartay Passion.
Hadaba waa kuwan 13 qodob:
Qofka oo leh karti uu ku arko meesha iyo arinta ay ku jirto fursad uu horumar ku gaarayo, kadibna isku daya in uu u raadiyo waxii u suurta galin lahaa si uu
arintaa uga miro dhalin lahaa.
In aanu qofku ka baqan in uu qasaare galayo in kale.
3- Horumarka jecel
Qofku in uu yahay mid jecel in uu mar walba wax barto.
4- xiisayn iyo karti badan
Qofka oo muujinaya xiisaha uu u qabo in uu horumar gaaro noqdana mid aad u karti badan taas oo looga jeedo qof madaale ah.
5- Kalsoonida iyo naftaada
In uu qofku naftiisa si fiican u yaqaan, iskuna kalsoon yahay.
6- In uu yahay qof degan, dareen wanaagsana u leh la dhaqanka dadka.
Qofka oo leh karti uu ku kala dooranayo jidka uu u maraayo horumarkiisa. Waxa jirta in uu qofku mararka qaar uu ku qasban yahay in uu kala doorto laba jid. Sida asaga oo kala doorta in uu waqtigiisa uga faa’iidaysto in uu wax barto ama in uu waqtigiisa ku dhamsyto fadhi ku dirir iyo sheeko aan macno lahayn.
Qofka oo leh haybad uu ku soo jiidan karo dadka.
Qofka in uu yahay mid shaqada uu ku jira u arko sidii tartan oo kale. Qof jecel in uu la tartamo dadka kale.
10- Meel wanaagsan, dad horumar gaaray, xiriir
In uu qofku joogo meel ay ka jirto wax isu sheegid iyo is tusida horumarka, in uu qofku ku daydo dadka horumarka gaaray sida Bil Gate iyo xiriir uu qofku la leeyhay dad badan oo shaqooyin heysta kuwaas oo kuwa kale sii bara qofka.
11- Dareen xoogan iyo jacayl
In uu qofku leeyahay dareen xoogan oo uu u qabo hourmarka, jecelna horumarka.
12. Haka harin: dadaalkii aad soo waday, xataa haday kaa hortimaado guul daro, ama dadka shaqo la’aanta ahi ku cayaan.waxaadna ogaataa inay guul darradu dhasho guul qiimo badan tahayna hordhici guusha weyn, hadaad ka hartase waxaad noqoneysa qof cumrigiisa khasaariyay.
13.Cadaadinta nafta: naftaada ku cadaadi sidey horay ugu gu socon laheyd mar kasta iyo si kastaba , haka shakinin hana ka xishoon hadafkaaga magac dhawgiisa iyo ku cel celintiisa, naftaadana ha mahdinin , hubsana inaadan wali gaarin meeshii u sareysay u qiimaha badanayd , mar kastaa sii raadi meesha aad joogto meel ka sareysa
Tilmaamhani waa kuwo guul lagu gaaro, waxaana haboon qofka inuu isaga is miisaamo meesha uu ka joogo tilmaamahaas balse si guud waxaan u oron karnaa umada somaaliyeed waa umad lagu imtixaansy fudeyd, dag dag iyo dhaqso afka buuxso, guul oradeysi dusha kaga dhac.
Taasina waa mid ka hor imaaneysa sunada ilaahay ee ku dhisan in guusha la gaaro kaliya markii la helo fikir wanaagsan, niyo adag dadaal isdaba joog iyo rabi oo la tala saarto
Hoobal yaan la hilmaamin!! (Qormo Xusuus iyo Taariikh wadata)
Tilmaamahaan Waxaa Lagu Gartaa Qofka Dib U Socodka Ahi ‘Hadaba Istijaabi”.